Mage 4 - Video Live in Mahamasina (Palais des Sports, 24 mars 2019) • Madagossip
Mage 4en direct Palais des Sports MahamasinaAlahady 24 mars 2019(c) Mass'in & Ivenco
Publiée par Madagossip sur Lundi 25 mars 2019
Mage 4 tao Mahamasina
Feno tanteraka ny Lapan’ny Fantanjahan-tena. Afa-po ny mpankafy. Avo lenta ny fampisehoana, voky ny maso, feno ny fo, farimparina ny feo ho an’izay nampiara-peo. Niakatra lenta iray indray ny tontolon’ny seho sy fampirantiana hiaka farany eto Madagasikara.
Nahafa-po ny hetsika. Mankasitraka ny Mass’in sy Ivenco.
Tagsaza itserana live mage4 mahamasina